မတရားတာကို လက်မခံဘဲ မမှန်တာကို မကြောက်တာဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရပါပဲ....
Posted by ယုန်ကလေး on Wednesday, 22 June 2011
Labels: ပြည်တွင်းသတင်း / Comments: (0)
ယုန်ကလေး ၂၂၊၆၊ ၂၀၁၁
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၆၆) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အခမ်းအနားကို အခုလ (၁၉)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ခိုင်ရဲ့ နေအိမ်မှာ ကျင်းပပြီး တာဝန်ရှိသူတွေ၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ NLD ကို အားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေ စုစုပေါင်း (၇၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြု စကားတွေ ပြောကြားခဲ့ကြသလို ကလေးထောင်မှာ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ ကိုမင်းအောင်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ကဗျာ တပုဒ်ကိုလည်း ရွှတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေက အခမ်းအနားကို နှောက်ယှက်တာတွေ မရှိပေမယ့် အ၀င်အထွက် ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်
အခမ်းအနားကို နံနက် (၈)နာရီမှာစတင်ပြီး (၁၀)နာရီမှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရူ့ရန်
လယ်သမား ကလေးငယ်တွေကို ကျောင်းပစ္စည်း ထောက်ပံပေးအပ်ပွဲ
Posted by ယုန်ကလေး on Tuesday, 21 June 2011
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တောင်သူလယ်သမား တွေရဲ့ ကလေး ၁၇၂ ဦးကို မေတ္တာအားမာန်အဖွဲ့က ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးငွေ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်၊
အဲဒီပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၇န်ကုန်မြို့ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာ အခုလ ၁၈ ရက်နေ့ကကျင်းပ သွားခဲ့တာပါ၊
အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုတောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့က တာဝန်ရှိ သူတွေ ၊ လယ်ယာမြေ အသိမ်းခံရတဲ့ လယ်သမားတွေ အပါအ၀င် ကလေးငယ်တွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကလေးတွေဟာ အစိုးရရဲ့ လယ်ယာမြေအဓ္ဓမ အသိမ်းခံရတဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ကလေးတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊
အဲ့ဒီနောက် အခမ်းအနားမှာ တက်ရောက်လာသူတွေက ကဗျာရွတ်ဆိုတာတွေ၊ အမှာစကား၊ ဆုံးမစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရူ့ရန်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပ
Posted by ယုန်ကလေး on Monday, 20 June 2011
မြန်မာဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ရဲ့ (၆၆) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားကို KIAထိန်းချုပ်ရာ လိုင်ဇာမြို့မှာ ကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကို KIO ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေ၊ အရာရှိကြီးတွေ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကချင်းအမျိုသမီးရေးရာ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ဒေသခံပြည်သူတွေ အပါအဝင် (၁၅၀)ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲမှာ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ရဲဘော်ဟောင်းတွေက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အလှူငွေ ကျပ် သိန်း(၅၀) လူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာတဲ့ သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွှေးနေ့ပွဲ အမှတ်တရာ လက်မှတ်ထိုး တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခမ်းအနားကို နံနက် (၇) နာရီမှာ စတင်ပြီ (၉)ခွဲမှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် ဆက်လက်ဖတ်ရူ့ရန်
Posted by ယုန်ကလေး
ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာ အစိုးရတပ်နဲ့ KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ပြီး ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဟာ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ကြုံနေကြရပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ကုသစောင့်ရှောက်မှုတွေဟာ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိ KIO လိုင်ဇာဌာနချုပ် ဒုက္ခသည်စခန်း ၆ ခုက ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အစားအစာ၊ အသုံးအဆောင်တွေကို KIO ကထောက်ပံပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထောင်သောင်းနဲ့ချီတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဟာ မြစ်ကြီးနား ၀ိုင်းမော်ဘက်မှာရှိတဲ့ မြို့တွေနဲ့ တရုတ် မြန်မာနယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ KIA တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး ၁၇ နှစ် အကြာ၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ကစပြီး နှစ်ဘက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ...။ ဆက်လက်ဖတ်ရူ့ရန်
Posted by ယုန်ကလေး on Sunday, 19 June 2011
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲ
Posted by ယုန်ကလေး on Friday, 17 June 2011
ရန်ကုန်မြို့ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲတခုကို အခုလ ၁၆ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကို ဒေါ်အေးမြင့်သန်း၊ မုံရွာ အောင်ရှင်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်သမားအဖွဲ့က ဦးကျော်မြင့်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဦးသန်းလွင်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ၈၈ မျိူးဆက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေ နဲ့ မိသားစုတွေက အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အမှတတရ စကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တဆက်ထဲမှာပဲ ကဗျာရွတ်ဆိုတာ၊ ဖယောင်းတိုင် ၈၈ တိုင် ထွန်းညှိတာနဲ့ ၊ မိုးပျံပူပေါင်း ၈၈ လုံး၊ ငှက် ၈၈ ကောင်ကိုလည်း လွှတ်တင် ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်၊
အလားတူ အဲဒါနေ့မှာပဲ မထ္ထီလာမြို့နယ်၊ ၇ခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်က နေရာအတော်များများမှာလည်း အခုလို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲတွေကို လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဦးရေ ၂၀၀၀ ကျော် ရှိနေသေးတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) AAPP-B စာရင်းအရ သိရပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရူ့ရန်
အလုပ်သမား၊ လယသမား သမဂ္ဂပေါ်ပေါက်ရေး...
Posted by ယုန်ကလေး on Thursday, 16 June 2011
မြန်မာအမျိုးသား အလုပ်သမား၊ လယ်သမား သမဂ္ဂပေါ်ပေါက်ရေး ကြိုးပမ်းသူများ (MNTU)က လွတ်လပ်တဲ့ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားသမဂ္ဂ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိတ်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေစားပေးပို့ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲကို အခုလ ၁၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ၊
အရပ်သားအစိုးရသစ်လက်ထပ်မှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ အမြန်ဆုံး ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်းလည်း MNTUက ဆိုပါတယ်။
အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ စီးပွားရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေ မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ITUC) ရဲ့ နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ မြန်မာနိုင်ငံက စက်ရုံတချို့မှာ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခလစာတိုးရရေးနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေ တိုးတက်ဖို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်တဲ့ အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့် ရဖို့၊ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနဲ့အညီ အခွင့်အရေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း မြန်မာ့ဒီကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ILO နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကို အခုလ (၁၃) ရက်နေ့က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရူ့ရန်
ကမ္ဘာ့သွေး အလှူရှင်များနေ့ ကျင်းပ
Posted by ယုန်ကလေး on Wednesday, 15 June 2011
၂၀၁၁ခုနှစ် ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့အထိမ်းအမှတ် ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားသွေးဌာရဲ့ အစည်းအဝေး ခန်းမမှာ အခုလ ၁၄ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်တွင်က သွေးသွင်းကုသမှုလုပ်ငန်း၊ သွေးလှူရှင် စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်း၊ သွေးလှူဘဏ် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ သွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ဦးနေ၀င်းနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက သွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဗဟုသုတ အကြောင်းအရာတွေကို ပညာပေး ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
A,B,O,AB ဆိုတဲ့ သွေးအုပ်စုတွေကို တွေ့ရှိ ခဲ့တဲ့ သြစတေးလျ နိုင်ငံသား Karl Landsteiner (ကရယ် လန်းစတိန်းနား) ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ကို သွေးလှူ ရှင်နေ့ အဖြစ် ၁၈၆၈ ခုနှစ်က စပြီး သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ၊
WHO ရဲ့ ၅၈ ကြိမ် မြောက် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပထမဆုံး သွေးလှူရှင် နေ့ကိုတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က တောင်အာဖရိက နိုင်ငံမှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရူ့ရန်
သန်လျင်နဲ့ ကျောက်တန်းမှာ လေပြင်းတိုက်
Posted by ယုန်ကလေး on Monday, 13 June 2011
ရန်ကုန်တိုင်း သန်လျင်မြို့နယ်နဲ့ ကျောင်းတန်းမြို့နယ်တွေမှာ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က လေပြင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် လူနေ အိမ်၊ အဆောက်အဦးတချို့ ပျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။
"အရှေ့အိမ်က တအိမ်လုံးပေါ့။ နောက်ဖေး အပင်က တပင်လုံးလိပ်ပြီးပါသွားတယ်။ အချက်လိုက်ကြီးပါသွားတယ်။ ပြန်ကောက်တော့ ငါးချပ်လောက် ပျောက်သွားတယ်" လို့ ကျောက်တန်းမြို့က ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်"
အဲ့ဒီ လေပြင်းကြောင့် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ စံချိန်မီရပ်ကွက်၊ (၆)လမ်းမှာ အဆောက်အဦး တချို့ ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင် လူတွေလည်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"အဲ့ဒီအိမ်မှာ သွပ်တွေအားလုံး အကုန်လှန်ကုန်တာပေါ့။ မီးကြိုးတွေ ပြတ်၊ လူကတော့ ကလေးတစ်ယောက် လက်မှာ အဆစ်လွဲသွားတာပေါ့.." လို့ စံချိန်မီရပ်ကွက်က ဒေသခံတဦး ပြောပါတယ်။
တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ အဲဒီလေပြင်းကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း သာကေတမြို့နယ်က သစ်ပင်တချို့နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုင်လဲပြိုခဲ့သလို မီးပြတ်တောက်တာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတဦးက ဆိုပါတယ်။
"ပထမဦးဆုံး သမီးတို့က မိုးအက်တာ။ ပြီးလဲပြီးရော မဟုတ်ဘူး လေယာဉ်ပျက်ကျတယ်လို့ ထင်တယ်။ ပြေးကြပြေးကြဆိုပြီးပြောတော့ လေက တဝှေ့ဝှေ့နဲ့ အပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။ ဒီလေးအိမ်ကလူတွေ ပြေးရတယ်။ ကလေးရော လူကြီးရော အကုန်ထွက်ပြေးရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ ၁၁ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ လေပြင်းတိုက်လို့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းနဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်က လူနေအိမ် အလုံး (၄၀) လောက် ပျက်စီးသွားပြီး ကလေး၊ လူကြီး တရာကျော် အိုးမဲ့အိမ့်မဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
Posted by ယုန်ကလေး on Sunday, 12 June 2011
Labels: ရသခံစားမှုများ / Comments: (0)
တစ်ချို့လူတွေက ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ကိုယ်ပိုင်ပြတိုက် လို သဘောထားကြတယ်။ ပုံလေးတွေတင်၊ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေရှာတင်၊ သီချင်းလေးတွေတင်၊ ဘယ်သူ like like, မ like like၊ ကိုယ် like တယ်။
ကိုယ်တင်ထားတာလေးပြန်ပြန်ကြည့်နေရတာ အမော။ ဘယ်သူမှ လာ မlike ရင်၊ ကိုယ်ဟာကို ပြန် like ထာ...းတတ်သေးတာ။ တစ်ချို့ကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဧည့်ခန်းကရှိုးကေ့စ် လိုသဘောထားတယ်။ ရှိုးကေ့စ်ဆိုတာ ရှိတာလေးတွေ စီစီရီရီတင်ပြီးကြွားတဲ့နေရာမဟုတ်လား။
ဘွဲ့ယူ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ အိမ်ဝယ်၊ ကားဝယ်၊ ဂါဝန်အသစ်ဝယ်၊ ဘောင်ဘီဖင်ကျပ်ဝယ်၊ ဖိနပ်သစ်ဝယ်၊ ခရစ်ဒက်ကဒ်ရ၊ သိသိသာသာ တစ်မျိုး၊ မသိမသာတစ်ဖုံ၊ နည်းစုံတယ်နော..။ (ငါ့တော့ သောက်ညင်ကပ်နေကြလောက်ပြီ.. ဟိ..ဟိ..။) တစ်ချို့ကျပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို အိမ်သာ လိုသဘောထားကြတယ်။ အိမ်သာကို လူတွေက ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ လိုနေချိန်ကြမှသာ အပြေးအလွှားလာကြတာလေ။
ကျန်တဲ့အချိန်ကျတော့ မနေအပ်တဲ့ အရပ်လိုလို ကျဉ်ချင်ကြတာကလား။ ခုလည်း အဲသလိုပါပဲ။ လူပျို၊ အပျိုဘဝမှာတော့ ရည်းစားရှာချင်တော့ နေ့ရော ညရော ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ဖေ့စ်ဘုတ်။ ရည်းစားလည်းရရော ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုအဖက်မလုပ်တော့ဘူး။
အဲ… အိမ်ထောင်ပြုလို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ဖေ့စ်ဘုတ်ဖြစ်ပြန်ရော..။ မဟုတ်ရင် မင်္ဂလာဆောင်ပုံတွေ တစ်အိမ်တက်ဆင်းလိုက်ပြနေရမှာပေါ့..။ အဲ.. မင်္ဂလာဆောင်ပြီး သွေးအေးသွားပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ခမျာ ချောင်ထိုးခံရပြန်ရော။ စောင့်ပေတော့ ကလေးရတဲ့အထိ။ အဲ.. ကလေးရပြီဆိုလို့ကတော့ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ပြန်ရောက်လာကြပြန်ပါရောမဟုတ်လား..။
ဖေ့စ်ဘုတ်ဘဝ သင်္ခါရပေါ့လေ။ တစ်ချို့တွေအတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ယောက္ခမအိမ် လိုပဲဖြစ်နေပြန်တယ်။ ယောက္ခမများ မတော်မဖြစ်လို့တော်ရပေမယ့် တော်ယုံတော့ ပတ်ပတ်သက်သက်မလုပ်ကြတဲ့သဘောမဟုတ်လား။ အဲလိုပဲပေါ့။ အကောင့်တော့ သူများဖွင့် ကိုယ်ဖွင့် ဖွင့်ကြပြီး၊ တစ်လနေလို့လည်း တစ်ခါအလည်မလာ၊ လာပြန်တော့လည်း ဖင်ပူအောင်မနေကြတဲ့သူတွေပေါ့။ သူတို့အတွက် ဖေ့စ်ဘုတ်က ယောက္ခမအိမ် လေ။
အဲ… တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဘော့စ်(Boss) လိုသဘောထားကြပြန်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ ဘယ်သွားတယ်၊ ဘာစားတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်၊ ဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုပြီး မပြတ်တမ်း Report လုပ်ကြတယ်။
တစ်ချို့အတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ဆရာဝန်ကြီး ကျလို့။ ဒီနေ့ အီးမပါဖြစ်ဘူး၊ ရှူရှူးတွေဝါတယ်၊ ခေါင်းတွေကိုက်တယ်၊ လည်ချောင်းထဲကပူတယ်၊ ဖင်ခေါင်းထဲကအေးတယ် နဲ့ လာလာပြောကြပြန်ရော။
တစ်ချို့လည်း တီးတိုးဖေါ် အဖြစ်မြင်ပြီး၊ ဒီနေ့ Moody ဖြစ်တယ်၊ ဒင်းတော့လား အစိမ်းလိုက်ကိုဝါးစားချင်တယ်၊ ဒီဘဝ သေတာအေးပါတယ်၊ ပျော်လွန်းလို့ဂျွမ်းတောင်ထိုးနေရတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ လာလာပြောကြပြန်ပါရောလား။
တစ်ချို့တွေများကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို အမှိုက်ပုံကြီး လို ဖွထားတတ်ကြပြန်ရော။ ဘာမှန်းခွဲမရတဲ့ပုံတွေတင်၊ ဝါးတားတားပုံလည်းတင်၊ ခွေးပုံတင်၊ ကြောင်ပုံတင်၊ အရက်ပုလင်းပုံတင်၊ အကောင့်ပိုင်ရှင်က ဘယ်သူလည်းဆိုတာ မှန်းမရလောက်အောင်၊ တစ်ပြုံတစ်မကြီး အုပ်သင်းဖွဲ့တဲ့ပုံတွေချည်းရွေးတင်၊ ဝင်ကြည့်မိပလားဆို မူးနောက်နေအောင်ကို လုပ်ထားတတ်ကြတာကလား။ တစ်ချို့ တစ်ချို့တွေတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို Chat Room လုပ်ဖို့သုံးကြပြန်တယ်။
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံအောက်မှာ ကွန်မင့်ပေးရင်းနဲ့ စကားလက်ဆုံတွေကျနေတတ်ကြတာမျိုး ကြုံဖူးမှာပေါ့။ ဟေ့ကောင်ကြီး မတွေ့တာကြာပေါ့ တို့။ ဟိုကောင်တွေနဲ့ရောတွေ့သေးလား တို့။ မင်းကတော့အရင်အတိုင်းပဲဟ၊ ခုဘယ်နိုင်ငံရောက်နေတုန်း တို့..၊ အဲဒီကနေစလိုက်ကြတာ ကွန်မင့်တွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ရော..။
ဓါတ်ပုံရှင်ခမျာ ကွန်မင့်များလို့ မပျော်နိုင်ပါဘူး၊ မင့်ထားတာတွေက ပုံနဲ့မဆိုင်ဘဲကိုး။ သူတို့ဖာသာ စကားလက်ဆုံလာကျနေကြတာမှုတ်လား။ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ကာစီနိုတစ်ခု လို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခု လို သဘောထားတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိလေရဲ့။
တက်တက်ပြီး ဂိမ်းကစားကြတာကလွဲလို့ ဘာဆို ဘာမှ မလုပ်ကြဘူးတဲ့လေ။ အဲလိုကျတော့ အက်ပြီးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သောက်ရူးလား လို့ မေးရတော့မယ်။ (ဟိ..ဟိ.. ဒါက ရန်တိုက်ပေးတာ)။ ဆင်းရဲသား ဖေ့စ်ဘုတ်တန်းစား ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ ဆင်းရဲတော့ အကောင့် တစ်ခုကို လင်နှင့်မယား မျှပြီးသုံးကြရရှာတယ်လေ။
တစ်ယောက်တစ်ခုမရှိနိုင်ကြရှာတော့ ဒီလိုပဲ တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ပေါ့..။ တစ်ချို့ကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်သူရင်းငှားချ တာလည်းရှိတယ်။ လယ်ပိုင်ရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်လယ်မလုပ်ဘူး၊ သူရင်းငှားကို သီးစားပေးပြီး လယ်လုပ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ့်အကောင့်ကို ကိုယ်ကမဝင်ဖြစ်ဘူး၊ တစ်ခြားတစ်ယောက်က ဝင်ဝင်ပြီး activities တွေလုပ် လုပ်ပေးရတာမျိုးပေါ့..။
အများအားဖြင့်တော့ ကောင်လေးတွေက ပိုင်ရှင်၊ ကောင်မလေးတွေက သူရင်းငှားလုပ်တတ်ကြတာပေါ့..။ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်များနေကြတဲ့ လူမှုနယ်ပယ်ထဲက မိတ်ဆွေတွေနဲ့ Keep in touch ဖြစ်နေဖို့တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က အများကြီး စွမ်းဆောင်ပေးနေတာအမှန်ပါပဲ။ သဟာဖြင့် သြဘာတို့ သူများတွေလုပ်သမျှကို ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောနေသလားလို့ မေးကြတော့မယ်။
ကျုပ်မှာလည်း ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ပါနော်။ ကျုပ်အတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ပြတိုက်တစ်ခု။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တာမျိုး ကိုယ်ပိုင်ပြတိုက်တော့ဟုတ်ဘူးဗျ။ အများကြည့်စေချင်လို့ လုပ်ထားတဲ့ပြတိုက်။ ပြတိုက်လေးလူစည်အောင်၊ နုတ်စ်တွေရေးရ၊ ပုံတွေ အော်ဂနိုက်ဇ်ဖြစ်အောင်တင်ရ၊ လူပျိုကြီးပြတိုက်မို့ လူအထင်မသေးအောင် ပြုပြင်နေရတာအမော။ ခုတော့ ဘုရားပေါ်က အလကားဝင်ရတဲ့ ဂေါပကပြတိုက်လောက်တော့ လူစည်ပါတယ်။
ယုန်ကလေးရဲ့ အီးမေးလ်ထဲ ၀င်လာတဲ့ စာလေးပါ။.. ဖတ်ပြီးသား သူငယ်ချင်းတွေရှိသလို မဖတ်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီစာလေးကို မဖတ်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စာရေး စာဖတ် ၀ါသနာပါတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ မှတ်ထားနော်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ကိစ္စ အစိုးရသစ်ထံ ထပ်မံ တင်...
အိုင်ပက် ၂ ကွန်ပျူတာအတွက် ကျောက်ကပ်တခြမ်း ရောင်းချ...
ဘုရားသုံးဆူတွင် ဖေါက်ခွဲ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်၊ ကလေးငယ် ၁ ဥ...
ရေလွှာလျှောစီးရင်း လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံး၊
ကချင်မိဘဂေဟာကို NLD အဖွဲ့ဝင် သွားရောက်ကြည့်ရှု
လူနေအိမ် (၁၇) လုံးကို စည်ပင်သာယာရေးက ဖျက်သိမ်းခိုင်း…
ဒလမြို့ အစိုးရကျောင်းအပ်ခ ပိုမိုကောက်ခံ
မြန်မာ ရေလုပ်သား နေရပ်ပြန်လာ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲ ကျ...
GW news (12)
my slfe (3)
1. For us surrender is out of questions. 2. We Shall retain our arms. 3. The recognition of the Karen State must be complete. 4. We shall decide our own political destiny.
Yonekalay. Powered by Blogger.
မမ LET IT BE
© Copyright ယုန်ကလေး. All Rights Reserved.